Khibrada barashada iyo barida BIM ee ku xeeldheer caado u leh CAD - Geofumadas
Disember, 2018 AutoCAD-AutoDesk, Baridda CAD / GIS, Microstation-Bentley
Waxaan fursad u helay inaan la falgalo Gabriela ugu yaraan saddex jeer. Midka koowaad, fasalladaas jaamacadda oo aan ugu dhowaanay kuliyadda kulliyadda injineernimada; ka dib fasalka wax ku oolka ah ee Farsamada Farsamada iyo ka dib mashruucii biyo xidheenka Rio Frío ee aagga Cuyamel, waqooyiga Honduras shirkadda Tunnelboring. Aniga oo ku jira caqabadayda hirgelinta NeoData iyo raadinta sida sahamiyayaashu u dayaceen qalabkan duugga ah isla markaana u bartay isticmaalka Leica-ka cusub ee ka imanaya Munich oo durba keensaday joogitaanka leh lambarka Bar; Waxay u dagaallameysay si maamul ahaan iyo farsamo ahaan ay u noqdaan laxanka waallida madax reer Kolombiya ah iyo Jarmal kale.
Wadahadalkeennii ugu dambeeyay wuxuu ahaa mid aad u xiiso badan waxaan go'aansanay inaan u rogno maqaal. Maanta, sida aan badanaa ugu yeero Gab !, Waxaa macquul ah in ay tahay Maareeyaha Maareynta BIM ee ugu horreeya xaaladdan, halkaas oo ay ku sugan tahay Honduran qalbiga, laakiin ay ku jirto qodxoda ganacsiga caalamiga ah oo ka rajo weyn.
-In Geofumadas sanadihii la soo dhaafay Waxaan ka hadlayaa BIM, inkasta oo ay si dadban uga sii badan tahay. Miyaad waxoogaa naga sifeyn kartaa ujeedada ahmiyadda la siinayo?
Hagaag, in kasta oo qaar badani horey u maqleen BIM (Qaab dhismeedka Macluumaadka Dhismaha), in badan oo ka mid ahi ma fahmin waxa ay tahay barashada habka BIM ee looga fulinayo shirkadaha. Waxaa laga yaabaa in hal dariiqo oo loo qaato ay tahay inaan kuu sheego dareenka aan ka qabay ardaydayda Revit (Architecture, MEP and Structural) ee deegaanka BIM, oo markii hore qeexayay fikradaha, ka dibna wax ka soo qaatay waayo-aragnimadayda shaqsiyeed. ma kula tahay?
-Laakiin dabcan. Dhamaantood waxaan ahay dhagaha.
Marka ugu horeysa, kuwa weli maqla erayga BIM, xasillooni, waxaan dhihi karnaa inay tahay xilli dhow. Dhismaha Macluumaadka Dhismaha (BIM) waxaa lagu qeexay qaab wax lagu kobciyey, oo ka kooban dhowr bangi, oo leh waxyaabo ay wadaagaan dad badan oo daneeyayaasha ah inta lagu jiro wareegga nolosha ee naqshadeynta, dhismaha, hawlgalka iyo xitaa dib u warshadeynta dhismaha. In ka badan ama ka yar oo tarjumaya qeexidda NBS (Qeexidda Qaabdhismeedka Qaranka).
Markaa muhiimada ay leedahay nidaamkani, waana taas sababta ay ugu heshay aqbalida weyn wadamada hore u maray. Sababtoo ah waxay noo ogolaaneysaa inaan si dhakhso ah u shaqeyno, oo aan iska kaashanno, gabi ahaanba feylasha dhijitaalka ah, oo leh muuqaal fiican iyo qorsheyn Intaa waxaa dheer in si joogto ah loo abaabulo mashaariicdeena iyadoo la raacayo qawaaniinta hadda jirta, oo leh kontaroolo fiican, ogaanshaha isku dhaca, keydinta kharashka, yareynta qashinka iyo dhamaan waqti yar.
- Way fiican tahay.
Dabcan way u fiican tahay! Inkasta oo mararka qaarkood aragti aanu ku dabaqi karin waxqabadka, inta badan wadamada soo koraya oo ah halka dhaqaalaheena dhaqaale ay xadidan yihiin. Xitaa si kastaba, waxaan u maleynayaa in BIM ay ka adkaan doonto isla markiiba ama ka dib.
-Waa hagaag, laakiin yeynaan sii wadin rajo xumo tan iyo bilowgii. U sheeg akhristayaashayda sida khibradaadu ahayd.
OK ???? Laga soo bilaabo waayo-aragnimadayda shakhsiyeed sida lataliye iyo macalinka BIM. Wadamada Central American, CAD waa mid aad u muhiim ah waxaana si weyn loo isticmaalaa. Waxaa jira xirfadle yaryar oo isticmaala Revit oo keliya badanaada dhismaha; Waxay yihiin jasiiradaha keligood shaqeeya. Waxaan maqlay warshadaha shirkadda dhismaha ka dhigtay qaabka qaabdhismeedka dhismaha ee Revit, ka dibna u guurto AutoCAD si ay qandaraaslayaal kale iyo naqshadeeyayaashu u shaqeeyaan. Xaqiiqdii waa waqti qashin ah.
Sidaa awgeed ku adkaysiga in, haddii aan la shaqeyn doonno BIM, waa inaan tababar siinnaa oo keliya naqshadeeyayaasha ka shaqeeya shirkadda, laakiin sidoo kale la-taliyeyaasha iyo qandaraasleyda, si loo magacaabo kuwa ugu muhiimsan. Waxaan dalkayga ku arkay xirfadlayaal badan oo ku qanacsan shahaadadooda oo aan doonayn inay wax sii bartaan, ma doonayaan inay horumar sameeyaan. Waxay la joogaan AutoCAD waana halka ay wax ku dhinteen. Waxay la mid tahay ku noolaanshaha da'da telefishanka madow iyo caddaan marka ay jirto adduun dhan oo dijital ah oo ina sugaya.
-Waan fahansanahay, falcelinta ku saabsan isbeddelka iyo fadhiidnimadu waxay ku badan tahay duruufahan. Laakiin miyaad ku aragtay wax hirgelin BIM ah Honduras?
Anigu run oo dhan ma lihi, laakiin shaqsi ahaan anigu wali kuma aan arkin fulinta BIM shirkadaha illaa halkan -ka hadlida habka maadada, ma aha qaabaynta 3D iyo sameynta kaliya - Mararka qaar waa waxoogaa jahwareer ah waxaanan u malaynayaa kun jeer in ay haajiraan iyo ku soo noqdaan qiyaastii 10 sano, laga yaabee inay durba horu kacsanaan jirtay wakhtigaas. Waa wax cajiib ah dhamaan dalabyada shaqo ee 'BIM' ee dalal kale, dabcan ma fududa in go'aankaas la sameeyo sababo badan awgood -hadda-.
- Maxaad u maleyneysaa inay saameyn ku yeelan karto BIM ma socdo xawaaraha aan rajeyneyno?
Waxaa jira dhowr arrimood oo bulsho iyo dhaqaale oo ku lug leh oo aan kuugu sheegi doono daabacaad kale oo ku saabsan sababta BIM uusan u dhammayn degitaanka dalalkeenna Bartamaha Ameerika. Markaan fiiriyo dhinaca togan, waxaan fursad u helay inaan ku tababaro xirfadlayaal dhisme ah Revit buuxa waxaanan qaatay fursad aan ku barto iyaga BIM. Badar bacaad ah them Badankood waligood ma maqal, laakiin markay soo bandhigaan way daneynayaan; si ay u awoodaan inay qabtaan mashaariic isku dhafan, kuwa bixiya, qaybta muuqaalka. Waxaan isku dayaa inaan xoojiyo qaybta aragtida, sida ay u fulinayaan mashaariicdooda, waxaan ku tusayaa qaar ka mid ah barnaamijyada BIM ee ka jira suuqa sida AutoDesk Revit, Bentley AECOsim, ArchiCAD, buugaagta iyo xeerarka BIM ee jira, sida ay u saameyneyso adduunka. Waxaan baraa iyaga in BIM aysan ahayn barnaamij ama 3D qaab, oo lid ku ah waxa dadka qaar u maleeyaan, inay tahay qaab.
-Wax yar ayaan fahansanahay. Waxaan ahaa macallin AutoCAD waagaas markii ay ahayd inaad sameysid tusaalayaal udhaxeeya miiska sawirka, jaantuska, taliyihii isbarbar yaalay, dhagaxa tirtiraha, oo leh wareegga, dejinta, amarrada jarista ...
Sawirkaan Dib-u-qaadista korsashada BIM, runti way la yaabaysaa ardaydayda iyo aqoonyahannadayda aan wadahadallada la siinayo. BIM-da waddamada horumaray waxay gaarayaan meel wanaagsan; waddamada qaarkood durba waa qawaaniin dawladeed. Markii aan ku bilowno fasallada, waxay la yaabeen sida ugu fudud ee loo qaabeeyo Revit. Runtii waxaan u arkaa inay AutoCAD dhib badan tahay marka la barbar dhigo Revit maxaa yeelay way fududahay in la aado moodellaynta oo la arko sida wax waliba qaab u socdaan. Way faraxsan yihiin markay samaynayaan dalxiisyada iyo fiidyowyada, markay aragti ku qaadanayaan kamaradda iyo markay arki karaan natiijooyinkooda ugu dambeeya.
Waxaan weydiiyay arday Injineer Madaniga ah maalin maalmaha ka mid ah waxa uu ka qabo ku beddelashada AutoCAD iyo Revit, wuxuuna ii sheegay inay qaadatay waqti dheer in la boodboodo. Marka markey la kulmaan, waa wax kale, saacado ayaan ku qaadan karnaa oo aad ayey u daneynayaan; waqtiga ayaa duulaya. Waxaan soo maray arday aan ahayn xirfadlayaal dhismaha sida injineerada Nidaamyada oo ay isku si wax u bartaan, way ku farxaan maxaa yeelay waxay yiraahdaan waxaan qorsheynayaa gurigooda. Marka ka soo horjeedka waxa dad badani u maleynayaan, barnaamijyada BIM kuma adka inay bartaan, laakiin waxay u baahan yihiin u heellan iyo tababar. Haddii aad si fiican ugu taqaano Ingiriisiga way fududahay maadaama ay jiraan caawimaad badan oo khadka tooska ah ah oo luuqaddaas ah, laakiin waxaad had iyo jeer ka heli kartaa caawimaad Isbaanishka.
-Waxaan ku jiray koorso BIM oo ka tirsan CentroCAD Nicaragua. Waan ka xumahay in dhibaatadu ay aniga igaga tagtay bartanka oo aan ku dhammaysan lahayn koorsada Skype. Laakiin waxaan xasuustaa in qaabka wax ku oolka ah iyo tartiib tartiib mashruuc loo horumariyo uu ahaa mid xiiso leh.
Haa, horumarka wax ku oolka ah ee habka tartiib tartiib ah ayaa ugu fiican. Eeg garaafka, muujinta gudaha ee guri. Dhamaadka usbuuca ugu horeeya, taasi waa, kadib 17 saacadood oo aad wax baraysid, waxaan kaaga tagay mashruucii kuugu horeeyay. Guri labo dabaq ah, oo labo maalmood gudahood looga daydo. Waa wax la yaab leh sida barnaamijyadan moodelinta BIM ay nolosheena ugu fududeeyaan, oo aan si dhakhso leh u shaqeyn karno. Halkan waxaan ku tusayaa moodel uu keenay mid ka mid ah ardaydayda: Nicolle Valladares.
Kadibna waxaan galnaa qaab dhismeedka 'Revit Structures' iyo 'MEP' waana halka ay wax ku xiiseeyaan, maxaa yeelay kani waa cusub yahay, inta badan koorsooyinka dalkayga waxay kaliya siiyaan Architectural Revit. Marka waa wax aad u xiiso badan in la arko moodelladan markay is dhexgalaan, iyo sida loo sameeyo iskaashiga BIM. Sida aad u arki karto mashruuc-hoosaadyada edbinta. Jaantusyada soo socda waxaad ku arki kartaa moodello qaabdhismeedyo ah, dhuumaha dhalada iyo qalabka wax lagu sawiro marka aan horayba u wada shaqeyneyno.
-Waxaan ku fahmay xiisahaaga Revit. Laakiin waxaad ii sheegtay inaad sidoo kale iyaga barayso waxyaabo kale oo beddel ah.
Dabcan, sidii aan uga wada hadalnay, BIM way ka badan tahay Revit, xitaa marka laga eego Bentley Systems, qorshaha I-model wuxuu leeyahay korsasho BIM ah oo ay ku jiraan maareynta mashruuca, maareynta hantida xiisaha leh. Laakiin waxaan u adeegsadaa Revit sababtoo ah caan ahaanta 'AutoCAD' macnaha halkan, anigoo fiirinaya wax ka badan Revit, si aan u baro mabaadi'da BIM. Waxaan sidoo kale aragnaa bandhigyada Presto (BIM 5D oo lagu dabaqay miisaaniyadaha), Bentley Synchro (BIM 4D oo lagu dabakhay Qorsheynta), Dynamo (qaabeynta horumarsan ee barnaamijyada iyo Revit), iyo kuwa kale, si looga tago qodxanta si ay usii wado barashada barnaamijyada kale si loo wanaajiyo xirfadlayaal.
- Waxaad ii sheegtaa sida ajandahaagu u yahay maalmaha soo socda.
Hadda waxaan fursad u helaynaa inaan bilowno koorsada Navisworks, waxaanan ku faraxsanahay inaan hore u sii socdo BIM 4D (qorshaynta), xitaa koox yar. Waxaa jira waxyaabo badan oo lagu baro BIM, dadkuna ma yaqaanaan waxaas oo dhan. Inkastoo ay jirto macluumaad ku saabsan internetka, ma jiraan had iyo jeer dhaqanka cilmi-baarista, waxay ku kooban yihiin waxa ay yaqaanaan. Taasi waa qalad weyn oo dhaqso ah ama waqti dambe baasaboorka, sababtoo ah mid aan la cusbooneysiinin.
- Muxuu yahay fikradda ah aragtida ardayda ee dhammaadka koorsada?
Waxaan xaqiijin karaa in ardaydayda, marka ay helaan koorsada, ay siiyaan isbeddel xagjir ah, malayntooda waxay u furan tahay dhammaan fursadaha ay ku gaari karaan adduunkan BIM iyo kacaanka dijital ah. Waxay u eg tahay inay ogaadaan wanaagga oo aan dib ugu noqon karin. AutoCAD kuma filna hadda.
-Waan kuugu raacsanahay. Raadinta koorsooyinka AutoCAD ayaa ku badan Google. Sideed u aragtaa caqabadaha ay wajahayaan ardaydan koorsada kadib?
Arrintaasi waa inaanu tababarno shaqaalaha, waxaan u maleynaynaa inay si kala duwan u fikiraan, laakiin shirkadaha waa inay leeyihiin barnaamijka si ay u sii wadaan khibradahooda. Waxaan la kulmay naqshad oo qaabeyn kara cabbirka 3, laakiin waa inuu ka shaqeeyaa AutoCAD sababtoo ah waxa ay ahayd waxa kaliya ee ku jiray shirkadiisii. Waa wareer.
Sidaas isbedelka of arinkii dhinaca BIM waa samaynta ma aha oo kaliya, laakiin waxa uu leeyahay si ay u gaaraan madaxdii, maamulayaasha, milkiilayaasha, macaamiisha, maamulayaasha mashruuca iyo waxdhisayaashii. Taasi waa sababta aan uga wada hadalno wareegga nolosha ee mashruuca, ma ahan oo keliya heerka naqshadeynta. Waa in isbedel ballaaran oo saamaynta ganacsiga oo dhan, maxaa yeelay, ka dibna kaliya ee aan ka arki kartaa isbedel la taaban karo ee sida aan horumariyo mashaariic aan la BIM. Marka la eego, isbeddelka habraaca waxaa loola jeedaa balanqaadka iyo bixinta.
Wadahadalku wuxuu iga tagay fikir. Aad ayaa looga fikiray, gaar ahaan markaan ka hadlayno caqabadaha ay waajibaadkaasi ku leeyihiin siyaasada guud si ay u nidaamiso BIM mashaariicda qandaraaska. sidaa darteed, iyadoo la raacayo hami rajo leh, waxaan qorsheynay kafeega cimilada Diseembar oo ku soo laabaneysa masiixiga.
Wareysiga aan caadiga aheyn, Gabriela Rodríguez, Injineerka madaniga ah, Master ee Maamulka Bim ee Jaamacadda Rey Juan Carlos ee Spain. Iyadoo su'aalaha uu hogaaminayo tifaftiraha Geofumadas.com.
Post Previous" Hore Leica Airborne CityMapper - xalka xiisaha leh ee khariidaynta magaalada
Post Next Ka tagista Venezuela ilaa Kolombiya - My OdysseyNext »
Hal Jawaab "Khibrada barashada iyo barida BIM ee ku saabsan macnaha CAD-da"
Amilcar Paz isagu wuxuu leeyahay:
Ka qayb qaadashada fiican ee fulinta naqshadeynta.